बालोन डी’ओर वितरण समारोहमा मेस्सीलाई बोलाइदै !! के नतिजा बाहिरिएकै हो ? - Experience Best News from Nepal
बालोन डी’ओर वितरण समारोहमा मेस्सीलाई बोलाइदै !! के नतिजा बाहिरिएकै हो ?
प्रकाशित मिति : शनि, मंसिर ७, २०७६
पारिओन्स स्पोर्ट्सले बार्सिलोना फुटबलर लिओनेल मेस्सीलाई बालोन डी’ओर समारोहमा उपस्थित हुन् आग्रह गरेको छ । कुनै समय बालोन डी’ओरमा मेस्सीको नाम नजोडिएको खण्डमा समेत मेस्सीले उक्त समारोहमा आफ्नो हिस्सा जनाएका थिए । बालोन डी’ओर समारोहमा मेस्सीलाई आयोजक टिमले नै आग्रह गर्दा कतै उनि नै बालोन डी’ओरका हकदार त होइनन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
तिन पक्ष लिओनेल मेस्सी, एलेक्स मोर्गान र पारिओन्स स्पोर्ट्स यस समारोहमा नाम जोडिएको छन, ट्वीटरका माध्यमबाट यस मुद्धा बाहिरिएको हो । मेस्सीले यस समारोहमा आफु हिस्सेदार रहे मात्र आफ्नो उपस्थिति जनाउने कुरा समेत बाहिरिएको छ । तर मेस्सीले यस बारे पूर्ण रुपमा आफुलाई थाह नभएको र आफु आउने नआउने बारे कुनै कुरा नखोलेको समेत बताएका छन ।
तर समर्थकहरुको नजरमा भने मेस्सीले बालोन डी’ओरका हकदार बनिसकेको देखाएका छन् ।
पारिओन्स स्पोर्ट्सले ट्वीटरमा मेस्सी समारोहमा आउने भने पश्चात समर्थकमा उत्साह बढेको थियो । तर स्पोर्ट्सले अन्य ट्वीटर प्रोयोगीलाई जवाफमा उनिहरु समारोहमा आउने पक्का नरहेको संगठनको तर्फबाट भने निमन्त्रणा पठाएको बताएका थिए ।
तर स्पोर्ट्सले उक्त जानकारी कसरी र किन सार्बजनिक गर्यो त्यो भने अन्योलमा नै छुटेको छ ।
एकै क्लबबाट सर्वाधिक धेरै ट्रफी जित्ने खेलाडी बन्ने दाउमा लिओनेल मेस्सी !!
यी हुन् मेस्सीका अविश्वसनीय दशकका १० ठुला उपलब्धिहरु !!
बार्सिलोनाले मार्टिनेज सम्झौता गर्ने विषय मेस्सीले गरे अस्विकार !!